» श्रम,रोजगार मन्त्री रामेश्वर राय यादवले डा.बाबुराम भट्टराईलाई १० आरोप लगाउदै कडा आलोचना आखिर किन यति धेरै आरोप लगए? पुर पढ्नुहोस, श्रम,रोजगार मन्त्री रामेश्वर राय यादवले डा.बाबुराम भट्टराईलाई १० आरोप लगाउदै कडा आलोचना आखिर किन यति धेरै आरोप लगए? पुर पढ्नुहोस, – हाम्रो खबर
श्रम,रोजगार मन्त्री रामेश्वर राय यादवले डा.बाबुराम भट्टराईलाई १० आरोप लगाउदै कडा आलोचना आखिर किन यति धेरै आरोप लगए? पुर पढ्नुहोस,
काठमाडौं,९ कार्तिक । गोकर्ण बिष्टलाई हटाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रामेश्वर राय यादवलाई गत मंसिरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीका रुपमा नियुक्त गरे । नियुक्तिपछि केही महिना गुमनाम रहेका मन्त्री यादव पछिल्लो समय विभिन्न विवादमा मुछिँदै आएका छन् ।
कोरोनाको महामारी र त्यसलाई रोक्न गरिएको लकडाउनपछि सबैभन्दा बढी प्रभावित श्रमिकहरु नै थिए । तर, अभिभावकीय भूमिकामा देखिनुपर्ने श्रममन्त्री यादवको कतै उपस्थिति देखिएन । विदेशमा रहेका हजारौं नेपाली श्रमिक स्वदेश फर्किन नपाउँदा उनले चुईंक्क बोलेनन् । श्रमिकले उनलाई खोज्दा पनि भेटेनन् । तर, ठगी र सिन्डिकेटमा संलग्न व्यवसायीहरुलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्यमा नियुक्ति दिएपछि भएको सार्वजनिक आलोचनाको प्रतिवाद गर्न उनी अघि सरे ।
अझै पनि श्रमिक वर्ग महामारीको चरम मारमा छ । के गर्दैछन् त श्रममन्त्री ? अनलाइनखबरले पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमै पुगेर उनीमाथि केही आलोचनात्मक विषयहरु उप्कायो ।
प्रस्तुत छ, यादवमाथि हाम्रा १० आरोप र उनका स्पष्टीकरण ।
आरोप १– मन्त्रीका रुपमा तपाईंले झण्डै एक वर्षमा गरेको कार्यसम्पादनबाट तपाईं आफैं असन्तुष्ट र निराश हुनुहुन्छ ।
यादव– हो, जति हुनुपर्ने हो, त्यति सन्तुष्ट छैन । परिस्थितिले साथ दिएन, दिइरहेको छैन । जुन गतिका साथ म काम गर्न चाहन्थेँ, त्यसमा बाधा आयो । अहिले पनि छ ।
मन्त्री भएपछि मन्त्रालयका ब्रिफिङ लिन २–३ महिना लाग्यो । त्यसपछि त कोभिड–१९को महामारी सुरु भइहाल्यो । त्यसले गर्दा हाम्रो कार्ययोजनाले मूर्तरुप लिन पाएन । मैले गर्न खोजेको काम र नेपाल सरकारले बनाएको कार्ययोजना कार्यान्वयवन गर्न गाह्रो भयो । महामारीका कारण नै मैले चाहेअनुसार गर्न नसकेको हो र म असन्तुष्ट नै छु ।
महामारीपछि ८०–८५ हजार नेपाली विदेशबाट रोजगार गुमाएर नेपाल आउनुभयो । अझै ५०–६० हजार आउने लाइनमा हुनुहुन्छ । यो परिस्थिति सुखद हैन । श्रममन्त्रीले देशभित्र र बाहिर रोजगारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तर, अहिले त भएकाको रोजगार खोसिने अवस्था आयो । वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने, देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने हाम्रो दायित्व हो । तर, महामारीका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएकालाई फिर्ता ल्याउनुपर्ने, विदेशमा मृत्यु भएकाको शव ल्याउनुपर्ने, देशभित्र रोजगारी खोसिएकालाई पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने लगायतका काममा हामी अल्झिनुपर्ने भयो । नयाँ रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिनुपर्ने बेला ठ्याक्कै उल्टो परिस्थिति बनेकाले नै सन्तुष्ट हुनु नसकेको हुँ ।
आरोप २ – चैतमा गरिएको लकडाउनमा देशभित्रका श्रमिकहरुले ठूलो समस्या भोगे । रोजगारी गुम्यो, हातमुख जोड्न मुस्किल भयो, श्रमिक घर फर्किन सयौं किलोमिटर भोकैप्यासै पैदल हिँडे । कतिले पारिश्रमिक पाएनन्, त्यतिबेला तपाईं गुमनाम हुनुभयो ।
यादव– यो गलत कुरा हो । व्यवस्थापनमा कमीकमजोरी भयो । तर, यो आकष्मिकरुपमा आइपरेको विपत्ति थियो । जस्तो कि, घरभित्र आगलागी हुँदा समय सीमित हुन्छ, के बचाउने ? बालबच्चा बाहिर निकाल्ने कि धनमाल ? के गर्ने ? प्राथमिकता जे पर्छ, त्यही गर्ने हो ।
महामारी पनि एक्कासी आयो । हामीले पूर्वतयारी गरेका थिएनौं । यहाँ ज्यालादारीमा बसेकाको सूची थिएन । कुनै खालका प्रमाणित कागजात थिएनन् । आकस्मिक अवस्थामा कसलाई राहत दिने ? हामीलाई यसमा समस्या परेकै हो ।
हो, श्रमिकले दुःख भोगे । यातायात बन्द भयो, श्रमिकहरु टाढा–टाढासम्म सयौं–हजारौं मिल पैदल हिँडे । त्यो परिस्थिति कसैले चाहेर आएको हैन । बाध्यता आईपर्यो । त्यतिखेर, आपत आउँदा कुन चाहीँ श्रमिकलाई राहत दिने भन्ने पहिचान भएन । त्यही कारण धेरै ठाउँमा पाउनुपर्ने श्रमिकले पाएनन्, नपाउनुपर्नेले पाए ।
व्यवस्थापकीय कमी त्यहाँ पनि देखियो । त्यसको पनि कारण के हो भने हामीसँग श्रमिकको कुनै आधिकारिक विवरण नै थिएन । त्यसलगत्तै मैले श्रमिक सूचना बैंक स्थापना गर्न लागेको थिएँ । बल्ल स्थापना भएको छ । अब देशभर काम गर्ने औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको त्यहाँ विवरण हुन्छ । देशभित्र र बाहिर रहेका मजदुर सबैको तथ्यांक त्यसमा हुन्छ । कुन श्रमिक, दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष के हो, त्यसको सबै सूचना त्यो श्रमिक सूचना बैंकमा रहन्छ ।
अब हामी श्रमिकको पहिचानपत्र पनि दिन्छौं । अहिलेसम्म जन्मेदखि मरिन्जेलसम्म मजदुरी गरेर बाँच्ने श्रमिकको कुनै पहिचान छैन, बीमा हुँदैन, पेन्सन लगायतका सामाजिक सुरक्षा हुँदैन । मजदुर दुर्घटनामा पर्दा पनि ऊप्रति कोही जिम्मेवार हुँदैन ।
यहाँ ६० प्रतिशत बढी श्रमिक कृषि क्षेत्रमा काम गर्छन् । उनीहरुबारे कुनै दस्तावेज र रेकर्ड छैन । अब सबै मजदुर श्रमिक सूचना बैंकमा जोडिन्छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि उनीहरुलाई जोड्ने योजना छ ।
त्यो हुँदा उसको भावी पिढीलाई पनि समाजिक सुरक्षा मिल्छ । त्यसैले विगतमा गर्न नसकेको कुरा अब गर्न सक्नुपर्छ भनेर मैले काम सुरु गरेको छु ।
आरोप ३– चैतदेखि ३ महिना देशका सबै गेट–वे बन्द भए । त्योबीचमा थुप्रै श्रमिक विदेशमा अलपत्र पर्नुभयो । जब चार्टर्ड उडान खुल्यो, ४ गुणासम्म महंगो हवाई टिकट राखियो । अलपत्र श्रमिकको उद्धारमा ध्यान नै दिनुभएएन । विदेश पुगेका श्रमिकमाथि श्रममन्त्रीका रुपमा अभिभावकीय भूमिका पनि निभाउन सक्नुभएन ।
यादवः तपाईंलाई हाम्रो प्रणालीबारे सबै थाहा छ । महामारी सुरु भएपछि व्यवस्थापनका लागि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) बन्यो । त्यसको अगुवाई उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललेज्युले गर्नुभयो । त्यो सीसीएमसीमा श्रममन्त्रीलाई राखिएन । आवश्यक पर्दा आमन्त्रितका रुपमा बोलाइने व्यवस्था थियो । त्यहाँबाट हुने नीतिगत निर्णयमा मैले काम गर्नसक्ने अवस्था थिएन ।
डा. बाबुराम भट्टराई पनि बाल्टी लिएर यसो दालभात बाँड्दै गरेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा देखियो । मलाई चाहिँ त्योखालको सोख छैन!
परराष्ट्र, पर्यटन, रक्षा, स्वास्थ्य, लगायतका म्न्त्रीको सहभागितामा त्यहाँ नीतिगत निर्णय हुन्थ्यो । हाम्रो आवश्यकता उहाँहरुले महसुस गरेको बेलामा मात्रै बोलाइन्थ्थ्यो । जुन दिन बोलाइन्थ्यो, त्यो बेलामा आफ्ना कुुरा मैले राखेको हुँ ।
पछिल्लो चरणमा सीसीएसीमा हाम्रो अनुपस्थितिले मलाई नै अप्ठेरो लाग्न थाल्यो । त्यसपछि मैले भनेँ कि महामारीका कारण सबैमन्दा बढी मार परेको वर्ग श्रमिक नै हो । सर्वाधिक असर परेको क्षेत्र श्रम हो । तर, श्रमिकको अगुवाई गर्ने मन्त्रालय नै संकट व्यवस्थापको कार्ययोजनामा सहभागी हुँदैन भने कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ? त्यसपछि लगातार सीसीएसीका बैठकमा मलाई आमन्त्रितका रुपमा बोलाउनुभएको छ । सुरु–सुरुमा त्यस्तो थिएन ।
नबोलाइएको बैठकमा म आफैं पुग्नु राम्रो हुन्थेन होला । यही कारणबाट श्रमिकको समस्यामा श्रममन्त्री बोलेनन् भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? विमान भाडादेखि तपाईंले उठाउनुभएका सबै विषय सीसीएमसीसँग जोडिएको कुरा हो । बाहिर समस्यामा परेका श्रमिकको व्यवस्थापनको जिम्मा पररराष्ट्र मन्त्रालयले लिएको छ । विदेशका दूतावास उहाँहरुको मातहत नै छन् । हामीले त्यहाँ सिधा निर्देशन दिन पनि मिल्दैन । हामीले समन्वय भने गरेकै हौं ।
यो परिस्थितिमा श्रम मन्त्रालयले कहाँनेर नेतृत्व लिने त ? हामीले अनुरोध गर्नेबाहेक के गर्ने ? विमान उडाइदिनुस् भनेर पर्यटनमन्त्रीलाई भन्नुपर्यो, श्रमिक समस्यामा परे भने परराष्ट्रमन्त्रीलाई भन्नुपर्यो । यस्तो परिस्थितिले गर्दा गुनासाहरु आएका हुन् ।
तर, जसले गरे पनि काम त सरकारले नै गर्ने हो । सरकारले महामारी व्यवस्थापनको लागि भनेर जुन कमिटी बनायो, त्यसमा श्रम मन्त्रालय नपरेपछि म निवेदन दिन जाने र जुलुस लिएर जाने कुरा भएन । सीसीएमसीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भूमिका मेरो थियो, म त्यही गर्दै थिएँ ।
आरोप ४– रोजीरोटी खोसिएपछि धेरै मजदुरको बेहाल छ । लकडाउनपछि खुलामञ्चमा सामाजिक अभियान्ताले सुरु गरेको खाना बाँड्ने क्रम अझै जारी छ । श्रमिकहरु रोजगारी नपाएर भोकै सडकमा थाल थाप्न बाध्य हुँदा श्रममन्त्रीले देखे–नदेखे झैं गर्नुभयो ।
यादवः सामाजिक सञ्जालले यो विषयमा बढी सक्रियता देखाएको हो । त्यो परिस्थिति छ पनि । अहिले त हैन, लकडाउनको समयमा यो समस्या बढी थियो । श्रमिकले काम नपाउने अवस्था भयो, त्यसको लागि टुँडिखेलमा मात्रै हैन, अन्य ठाउँमा पनि खाना खुवाइयो ।
व्यक्तिगत तवरमा हामीले पनि त्यस्ता खाना खुवाउने अभियानलाई सघायौं । हाम्रै पार्टी कार्यालयमा पनि खाना खुवाइयो । यो हामीले नदेखेको, नबुझेको र नसुनेको विषय हैन ।
डा. बाबुराम भट्टराई पनि बाल्टी लिएर यसो दालभात बाँड्दै गरेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा देखियो । यो व्यक्तिगत ‘एटिट्च्युड’ को कुरा हो । फोटो खिचाउन बाल्टीमा दाल लिएर बाँडनु र वास्तविक जीवनमा त्यस्तो काम गर्नु फरक छ । मलाई चाहिँ त्योखालको सोख छैन ।
मैले ६०–७० क्विन्टलभन्दा बढी चामल वितरण गरेँ । तर, त्यसरी श्रममन्त्रीले पठाए भनेर तपाईंले कतै देख्नु भएन होला । संकट परेका बेला हामीले सकेको गर्यौं । अरुले जोडजाड गर्दिएपछि डा. साबजस्तो प्रतिष्ठित मान्छे पुगिहाल्नु भएछ । त्यो आफ्नो आफ्नो सोच हो, उहाँको त्यहाँ कुनै योगदान थिए ।
मैले डा. साबमाथि व्यक्तिगत कमेन्ट गर्न खोजेको हैन, शैलीको कुरा गरेको हुँ । त्यस्तो गर्नु मेरो रुचीको विषय हैन । म विज्ञापनमा विश्वास गर्दिनँ । म सेवामा विश्वास गर्छु । मैले मन्त्री र व्यक्तिगत हैसियतले पनि सक्ने जति सेवा गरेकै हो ।
लकडाउनका बेला ‘बल्क’ मा समस्या पर्दा राज्यले गर्न नसकेको वा नभ्याएको सत्य हो । त्यो मैले इन्कार गर्न हुँदैन । तर, गर्न खोज्दा खोज्दै पनि धेरै ठाउँमा अप्ठेरो परेको हो ।
पाउनुपर्नेले पाएनन् होला, तर संघीय, प्रदेश, स्थानीय तहबाट अर्बौं रुपैयाँको राहत वितरण भएको हो । त्यसैले हामीले भविष्यमा पर्नसक्ने अरु समस्यालाई ध्यानमा राखेर श्रमिक परिचयपत्र वितरणको योजना बनाएका हौं ।
आरोप ५– तपाईंहरुले अर्बौं खर्च गर्ने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आलोचित छ । यो विपन्न वर्गका केही मजदुरका लागि राहत दिने कार्यक्रम त बन्ला । तर, यो शैलीले रोजगार दिन सकिन्न भन्ने विज्ञहरु बताइरहेका छन् । तपाईं मन्त्री नहुँदैदेखि यो खालको बहस छेडिएको थियो । तर, तपाईंले झन् बजेट बढाएर कार्यक्रमलाई राष्ट्रको ढुकुटी दुरुपयोग गरिरहनुभयो ।
यादवः यो कुरा कुरा सत्य हैन । मैले यो कार्यक्रमबारे सुरुबाटै आफ्ना धारणा बाहिर ल्याएको छु । यो कुनै ‘बल्क’ मा रोजगारी दिने कार्यक्रम हैन, आधार मात्रै बनाउने हो । यो त ‘श्रम गर्नुपर्छ,’ भन्ने भावना विकास गराउने कार्यक्रम हो ।
प्रत्येक गाउँपालिकामा बेरोजगारको सूची बनाउने र उनीहरुलाई सय दिनको रोजगारी दिने भनेर सरकारले यसलाई कल्याणकारी कार्यक्रमका रुपमा ल्याएको हो । अर्को रोजगारको व्यवस्था नभएसम्म सीप पनि सिक्ने अवसर यसले सिर्जना गर्छ भन्ने हो ।
प्रारम्भिक अवस्थामा यो कार्यक्रमबारे धेरै कमेन्टहरु आए । पूर्वतयारी नभएको बेलामा आलोचना भएकै हो । कतिले बाँदर धपाउने र झार उखेल्ने रोजगारीका रुपमा समेत ब्याख्या गरे । त्यो सत्य पनि थियो, त्यो बेलामा कार्यक्रमको सही व्यवस्थापन भइसकेको थिएन ।
तर, म मन्त्री भएर आएपछि कार्ययोजनामा आधारित भएर मात्रै बजेट पठाउने निर्णय गरेँ । र, अब हरेक स्थानीय तहले कार्ययोजना पठाएपछि त्यसलाई हेरेर मन्त्रालयले बजेट तल पठाउँछ । त्यसपछि कार्ययोजना अनुसार स्थानीय तहले श्रमिकलाई कार्यान्वयन गर्दै त्यहाँ विकास निर्माणको काम गर्छन् ।
मैले कार्यक्रमलाई अझ वैज्ञानिक हिसावले लैजान खोजेको छु । यसलाई उत्पादनमुलकतिर लगाउने योजना छ । सय दिनको रोजगारी गर्दा औपचारिकता मात्रै पुरा गर्नेभन्दा राष्ट्रिय उत्पादकत्व वद्धिमै योगदान गर्नसक्ने गरी काम गराउने योजना हाम्रो हो । जस्तो कुनै ठाउँमा बाँध बाँधेको छ भने त्यहाँ फलफूल वा उपयोगी वृक्षारोपण गर्दा के हुन्छ ? प्राकृतिक सन्दरता पनि बढ्छ, पालिकालाई केही वर्षपछि आम्दानी पनि हुन्छ ।
कतै कृषि फर्ममा नै सय दिनको काम दिइयो भने श्रमिकले सिप पनि सिक्छ । उत्पादकत्व पनि बढ्छ । हामीले यस्तो कार्यक्रम पनि बनाउने कि भनेर अघि बढेका छौं ।
आरोप ६– पैदल हिँडेर आएका धेरै श्रमिक महामारी साम्य नै नभई दसैंको मुखमा भारत फर्किए र फर्किँदैछन् । नाकामा नेपाल आउने भन्दा भारत जानेको संख्या ठूलो छ । श्रममन्त्रीका रुपमा तपाईंले यस्ता विषयलाई नजरअन्दाज गर्नुभयो ।
यादवः हाम्रा नेपाली श्रमिक जो तेस्रो मुलकुमा रोजगारीमा जान सक्ने अवस्था छैनन्, उहाँहरु मौसमी रुपमा भारतमा काम गर्न जानुहन्छ । एउटा सिजन नेपालमै काम गर्ने र खाली बस्नुपर्ने सिजनमा भारतका सहरहरुमा गाएर काम गर्ने प्रचलन छ । त्यहाँबाट श्रमिकले केही आर्जन गरिरहेका हुन्छन् ।
हजारौं किलोमिटर हिँडेर आएकाहरु पनि फेरि फर्किए, किन त ? किनभने उहनीहरुले यहाँ ‘बल्क’मा रोजगारीको अवसर खोजिरहेका थिए । तर, पाएनन् ।
अर्को कारण पनि छ । जति कमाई भारतमा हुन्छ, त्यति यहाँ हुँदैन । यस्तो परिस्थितिमा बचेको समयको सदुपयोग गर्न निकटतम् दूरीमा गएर काम गर्छन् । यसलाई सहज पहुँचका हिसावले पनि हेर्नुपर्छ । नेपाल र भारतको बीचमा कुनै डिमार्केसन छैन, सीमा खुला छ । मान्छेले यसलाई सहजताका साथ लिइरहेको हुन्छन् ।
यो नेपाल र भारतबीचको भौगोलिक तथा राजनीतिक विशेषता पनि हो । तर, यो कुरा पनि सत्य हो कि रोजगारीको व्यवस्थापन गर्न हामीले सकेका छैनौं । हामी प्रयत्नरत छौं । जबसम्म ठूला–ठूला परियोजनाहरु यहाँ बन्दैनन्, तबसम्म रोजगारीका अवसरहरु धेरै सिर्जना हुँदैन ।
अहिले १५ दखि २० लाख मजदुर त निर्माण क्षेत्रमा छन्, त्यसमा ५ लाख त भारतीय पनि छन् । अहिले त त्यो निर्माण क्षत्रेको काम पनि रोकियो । पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्नेहरु पनि समस्या परे । यो परिस्थितिले उद्योग कलकारखाना पनि बन्द छन् । त्यसैकारण नेपालबाट भारत जाने स्थिति कायमै छ । भारतीयहरु पनि नेपाल आएर काम गरिरहेका छन् ।
हामी सबै श्रमिकको तथ्यांक राखेर उहाँहरुलाई सिपयुक्त तालिम दिने पक्षमा छौं । सातवटै प्रदेशमा सिप विकास केन्द्रहरु विकास गर्ने योजना छ । सीप सिकेपछि श्रमिकले सहजरुपमा काम पाउँछन् । रोजगार पाएनन् भने पनि आफैंले केही गर्न सक्छन् । सीप सिकेर विदेशमै गएपनि आम्दानीसँगै रेमिट्यान्स बढ्छ । जोखिमयुक्त काम गर्न पर्दैन ।
यसले त दशेको उत्पादकत्व पनि बढ्छ । त्यसैले अब हामी सिप सिकाउने परियोजनामार्फत रोजगारी सिर्जनामा बढी जोड दिने पक्षमा छौं । त्यसका लागि सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयसँग छलफलमा छौं ।
आरोप ७– तेस्रो मुलक जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिइन्छ, बीमा गराइन्छ, कतिपय अवस्थामा अप्ठेरो पर्दा उद्धार पनि गरिन्छ । तर, भारत गएर काम गर्ने नागरिकलाई सरकारले दोस्रो दर्जाको नागरिकजस्तो व्यवहार गर्छ । यसलाई तपाईले पूरै नजरअन्दाज गर्नुभयो ।
यादव ः त्यो आरोप केही हदसम्म ठीक हो । तर, यो समस्या पनि तथ्यांक नहुँदा नै भएको हो । हामीसँग त्यसरी भारत जाने श्रमिकको विवरण नै छैन । पहिला त तथ्यांक लिनुपर्छ । अब श्रम स्वीकृतिका प्रक्रियालाई अझ वैज्ञानिक बनाएर लैजानुपर्छ । भारतमा जाने श्रमिकले पनि श्रम स्वीकृति लिएर जाने कि ? भारतीय श्रमिकलाई पनि यहाँ श्रम स्वीकृति दिएर मात्रै काम गराउने कि ?
त्यसका लागि दुई देशको बीचमा समझदारी विकास गर्नुपर्छ । त्यो नभएसम्म त अहिलेकै शैली चल्छ । नेपालबाट भारत जाने र भारतबाट नेपाल आउने श्रमिकको हितको लागि पनि यो गर्नुपर्छ ।
आरोप ८– सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबै सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने नीति लिएको छ । तर, व्यवसायीहरुकै आरोप छ कि तपाईं आफैं कतारको रोजगारीमा सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै सहभागी गराउने गरी सिन्डकेट खडा गर्न लाग्नुभएको छ ।
यादवः नेपाल सरकार र श्रम मन्त्रालय कुनै प्रकारको सिन्डिकेटमा विश्वास गर्दैन । त्यस्तो कुनै सिन्डिकेट हामी लागू गर्दैनौं । यो लोकतन्त्र हो । यहाँ सरकारले गर्ने काम परादर्शी हुन्छ । सबै काम पारदर्शी रुपमा गरिएको छ, गरिन्छ र गरिनेछ । यसमा धेरै लामो स्पष्टीकरण दिनुपर्ने पनि छैन । सिन्डिकेट हुँदैन ।
नेपाल सरकार र सम्बन्धित देशसँग जुन किसिममा सहमति, सम्झौता र समझदारी भएको छ, त्यसका आधारमा सबै काम पारदर्शी रुपमा काम अघि बढ्छ । कुनै व्यक्ति र संस्थाको स्वार्थ पुरा गर्न काम गरिँदैन ।
आरोप ९– तपाई श्रम मन्त्रालयमा आउनासाथै म्यानपावर व्यवसायीले खुसियाली मनाए । सामाजिक सञ्जालहरुमा तपाईं र व्यवसायीबीचको हार्दिक सम्बन्ध रहेको झल्किने तस्वीर पनि देखिए । ठगी र सिन्डिकेटमा संलग्न व्यवसायीलाई पनि तपाईंले वैदेशिक रोजगर बोर्डमा मनोनयन गर्नुभयो । म्यानपावर व्यवसायीसँग तपाईंको नचाहिँदो हिमचिम छ ।
यादव–तपाई भेट्न आउनुभयो, तपाईसँग सौहार्दपूर्ण कुराकानी भइरहेको छ । तपाई गेटभित्र पस्दा एक्सरे त गरेको छैन । तपाईंको सम्पूर्ण गतिविधि मलाई थाहा छैन । मसँग भेट्ने व्यक्तिबारे मलाई थाहा छैन ।
कुनै नियुक्ति गर्दा तपाईं योग्य हो भने गरिन्छ, होइन भने गरिन्न । म कसैप्रति आग्रह–पूर्वाग्रह राखेर काम गर्दिनँ ।
म सबैसँग अलि बढी नै भेटघाट गर्छु । मन्त्रालयको कामकाजको सिलसिलामा म्यानपावर व्यवसायीसँग सौहार्दता हुनैपर्छ । उनीहरुको समस्या मन्त्रालयले र मन्त्रालयको समस्या उनीहरुले नबुझ्ने हो भने श्रमिकहरु कहाँ–कहाँ मारमा छन्, समस्या के छ भन्ने जानकारी नै हुन्न । सहजताका लागि गरिएका काम र भेटघाटलाई पूर्वाग्रही ढंगबाट विश्लेषण गर्न हुँदैन ।
आरोप १०– इजरायलसँग श्रम समझदारी भयो । तर, यसअनुसार इजरायल जाने श्रमिकले लागत खर्च आफैं बेहोर्नुपर्ने भाियो । खाडी तथा मलेसियामा जाने श्रमिकका लागि शून्य लागत भनिरहेको सरकारले आफ्नै संयन्त्रबाट श्रमिक पठाउँदा भने लागत श्रमिकमाथि थोपर्न लागेको छ ।
यादव–इजरायससँग सरकार–सरकार (जीटूजी) सम्झौता भएको छ । कोरिया, जापानसँग पनि यस्तो सम्झौता छ । इजरायलले रोजगारको व्यवस्थापन आफैंले गर्दैछ । त्यहाँ निजी क्षेत्र त्यसमा संलग्न हुने हैन ।
त्यहाँको सरकारले नै केयर गिभर लैजान खोजेको हो, त्यहाँको सरकारी अस्पतालमा । अब तपाईं श्रमिकका रुपमा त्यहाँ श्रम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने आफ्नो खर्च त बेहोर्नुपर्यो नि । विमान भाडा, भिसा शुल्क तिर्नुपर्यो । यसलाई सरकारले शुल्क लियो भन्न पनि मिल्दैन ।
फ्रि भिसा र फ्रि टिकट निजी क्षेत्रले निजी क्षेत्रलाई श्रमिक पठाउँदा (पीटूपी) को हकमा मात्रै हो । सरकार र सरकारबीचमा त्यस्तो सम्भव हुन्न । त्यस्तो मेकानिज्म विकास भएको छैन ।
इजरायलमा कामदार पठाउनेबारे कार्यविधि बन्न पनि बाँकी छ । त्यसले पनि अरु धेरै कुराहरु तय गर्छ ।